Inkcazo yeNkcazo - Indlela yokuxelela ukuba ungumNcedisi
Indlela Yokuxelela Ukuba Unyanisekile kwiqela lezoPolitiki okanye uMviwa
Ukuba unomdla, kuthetha ukuba unamathela kwiqela lezopolitiko, iqela, ingcamango okanye isizathu. Ukuba uncedisana nawe mhlawumbi ubonisa "ukungaboni, ukubandlulula nokungahloneli." Kuhluke ngokuba ngumntu ovota ukuvota okanye ozimeleyo kwezopolitiko. Ukukubeka ngokucacileyo, ukuba ngumxhasi akuyinto entle.
Intsingiselo yokutshatyalaliswa kweengcamango. Ukuba unengcamango, kuthetha ukuba uhambelane neengcamango ezinzima.
Awuyithandi ukunyaniseka. Kwaye kunzima ukuthetha naye.
Ngoko. Unokuyichazela njani ukuba ungumlingani?
Nazi iindlela ezinhlanu ezilula ukuzithetha.
1. Awukwazi ukuthetha ngezoPolitiki ngaphandle kokuvutha
Ukuba awukwazi ukuthetha ngezopolitiko nabantu kwaye uhlala uhlala kunye nabahlobo , ungoqabane. Akukho zimbini iindlela malunga nalo. Ukuba awukwazi ukuthetha iipolitiki ngaphandle kwengxoxo ephela kwi-egos ephazanyisiweyo kwaye uzive uvakalelwa, ungoqabane. Ukuba awukwazi ukubona ngaphesheya kombambano kwaye uqhwenga ngokukhawuleza ukusuka kwitheyibhile lesidlo sakusihlwa, ungoqabane.
Funa uxolo lwakho lwangaphakathi. Yaye uqonde oku: Awukho into enhle malunga nayo yonke into. Akukho mntu.
2. Uvota i-Line Straight Party Line
Nantsi le mpahla: Ukuba ubonisa ibhokisi lokuvota ngaphandle kokwenza umsebenzi wakho wesikolo kodwa usondeza i-lever yekitikiti yeqela elichanekileyo ngaso sonke isikhathi, ungoqabane. Enyanisweni, ufanisa inkcazo ye-partisan ku-T: umntu obonisa "ukungaboni, ukubandlulula, nokungahloneli kakuhle" kwiqela lezopolitiko.
Ukuba awufuni ukuba ngumlingani, nantsi isikhokelo esiluncedo kuyo yonke into ofuna ukuyilungisa ukuba ulungiselele uMhla woNyulo . Inqaku: Vote kumviwa obalaseleyo, kungekhona iqela.
3. Ujonga i-MSNBC okanye i-FOX News
Akukho nto engalunganga ngokubukela i-MSNBC okanye i-FOX News. Kodwa masibize oko kukuthi: Ukukhetha umthombo weendaba kunye nolwazi oluxhasa imbono yakho yehlabathi.
Ukuba uyaphakamisa, uphawula uRachel Maddow kwi-MSNBC. Ukuba ujikezela ngakwesokudla, ulungela kuSean Hannity .
Yaye, ewe, ukuba wenza oku ungoqabane.
4. Usihlalo wePolitiki
KULUNGILE. Ukulungelelana, ngumsebenzi wabantu ukuba babe nxaxheba. Kwaye abo bantu baqhubeka besebenza kwibala lezopolitiko . Oko kukuthi, amaqela ngokwawo. Ukuba ungumongameli weKomiti yeSizwe yeRiphablikhi okanye i-GOP inxaxheba kwidolophu yakubo, kusebenza ukuba kube yintsebenziswano. Yingakho unomsebenzi: ukuxhasa abaviwa beqela lakho ngokungaboniyo kwaye ngaphandle kokubandlulula.
5. UChothoza uMthetho weHatch
Masithemba ukuba izinto azifumani ezi zinto zimbi. Kodwa ukuba ungumqeshwa karhulumente kwaye ufumene ukuba uphula umthetho we-Hatch Act, uziphatha njengomxhatshazo uya kuziphatha.
Ibali elidibeneyo: Ngaba iipolitiki zibi ngakumbi kunoko?
Umthetho we- Hatch (1939) unqanda umsebenzi wezopolitiko olawulayo abasebenzi baseburhulumenteni karhulumente, uRhulumente waseSithili wase-Columbia kunye nabanye abasebenzi baseburhulumenteni basekhaya nabasebenzi basebenzisene neenkqubo ezixhaswe ngemali. Umthetho ujoliswe ukuthintela izixhobo ezixhasiweyo zentela ekusetyenzisweni kwiiprojekthi zenkxaso; Kwakhona kuhloswe ukukhusela abasebenzi baseburhulumenteni ekunyanzelekeni kweengxaki kubaphathi bezopolitiko.
Ibali elifanayo: Kutheni amaRiphablikhi aBomvu kunye neDemocrats Blue?
Ithetha ntoni le nto? Ewe, makhe sisebenzele i-arhente enenkxaso-mali ubuncinci kwinqanaba likaRhulumente waseburhulumenteni. Ngaphantsi kwe-Hatch Act awukwazi ukukhankasela iofisi okanye ukubandakanya nayiphi na indlela efana nezopolitiko. Kufuneka uqale umsebenzi wakho kuqala. Urhulumente wesigqeba akafuni ukunika imali umrhumeli werhafu kwi-arhente abasebenzi bakhe abaziphatha njengabaqabane.
I-Atomic Bomb Cake Recipe
Unqulo LwaseNqabileyo Lwasehlabathini
I-Lucky Dragon Incident | I-Bikini Atoll Test
I-Element yoMlilo kwiKhadi lokuzalwa
Uluhlu lwadlalwayo: Iingoma zokuhlamba